Fanazavana ireo sary an’ohatra 2 - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Ny valala dia hilazany zavatra mpandany, na mpandrava: Malakia 3:11 « Ary hasiako teny mafy ny valala* noho ny aminareo, ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny, ka dia hahavanom-boa ny voalobokareo any an-tsaha, hoy Jehovah, Tompon’ny maro. [Heb. mpandany] »
Fa mety entiny hilazana fahamaroana ihany koa ny valala: Mpitsara 7:12 « Ary ny Midiana sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana rehetra dia nandry teny an-dohasaha, tahaka ny valala ny hamarony; ary tsy hita isa ny ramevany, tahaka ny fasika any amoron-dranomasina ny hamarony. »
Raha milaza vehivavy izy dia inona ny heviny? Satria mahita isika any amin‟ny apokalypsy toko faharoa ambin‟ny folo, izay miresaka vehivavy mitafy masoandro, ary any amin‟ny apokalypsy toko fahafito ambin‟ny folo kosa dia mahita hoe vehivavy janga lehibe mitaingina rano, sns… Ka tsara raha fantarintsika ihany ny dikan‟ny teny hoe vehivavy.
Ny VEHIVAVY dia midika ho FIANGONANA no heviny:
Efesiana 5:22 – 25 «22 Hianareo vehivavy, maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny Tompo. 23 Fa ny lahy no lohan’ny vavy, dia tahaka an’i Kristy koa no Lohan’ny fiangonana*; ary Izy no mpamonjy ny tena. [* Gr. eklesia] 24 Fa tahaka ny aneken’ny fiangonana* an’i Kristy no haneken’ny vavy ny lahy koa amin’ny zavatra rehetra. [* Gr. eklesia] 25 Hianareo lehilahy, tiava ny vadinareo, dia tahaka ny nitiavan’i Kristy ny fiangonana* ka nanolorany ny tenany hamonjy azy, [* Gr. eklesia] »
Dia mazava be izany, ianareo lehilahy tiava ny vadinareo. Iza moa no vadin‟ny lehilahy? ny vehivavy no vadin‟ny lehilahy fa tsy lehilahy, raha tsy hoe PD angaha.
Ka ianareo lehilahy manambady vehivavy io izany, dia didian‟i Jesosy Kristy hitia ny vadiny avy, tahaka ny itiavan‟i Jesosy Kristy ny fiangonana. Ka ny fiangonana izany, dia endriky ny vehivavy vadin‟i Jesosy Kristy. Dia toy izany koa i Jehovah araka ny ahitantsika azy any amin‟ny Jeremia 3:14 « Miverena, ry zaza mpiodina, hoy Jehovah, fa Izaho ihany no vadinareo; Ary hangalako iray isan-tanàna ianareo sy roa isam-pokony, ka ho entiko ho any Ziona ianareo; »
Izany hoe, ny fiangonana izany dia ny isiraely, izy no natao hoe “vadin‟i Jehovah”. Ka ny VEHIVAVY dia midika ho FIANGONANA.
Raha milaza izany izy hoe vehivavy janga, dia midika izany hoe: fiangonana mampirafy an‟Andriamanitra izany; Ny antsoina hoe janga dia midika hofananam-bady hafa ankoatra ny vadiny. Ilay vehivavy janga izany dia midika hoe fiangonana iray izay sady manompo an‟Andriamanitra, no manompo zavatra hafa: sady manompo sampy izy, no sady miantso an‟Andriamanitra, no miantso andriamani-kafa.
Ohatra iray momba ny vehivavy: satria efa nahalala teny miafina na “code” maromaro izany isika dia efa afaka sahady mamaky ny andininy sasan-tsasany ao amin‟ny baiboly:
Apokalypsy 17:1 « [Ny amin’ilay vehivavy janga (dia Babylona), izay nitaingina ny bibidia nivolon-jaky] Ary tonga ny anjely anankiray tamin’izy fito izay nanana ny lovia fito, dia niteny tamiko nanao hoe: Avia aty; dia hasehoko anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe, izay mipetraka eny ambonin’ny rano maro, »
Ny vehivavy izany aloha dia efa fantatsika fa midika hofiangonana ny heviny; ary ny rano maro dia midika ho vahoaka na firenena maro. Ny hoe vehivavy janga lehibe, izay mipetraka eny ambonin’ny rano maro izany dia midika hoe: fiangonana lehibe iray izay manambady maro, na manompo zavatra maro, mipetraka eny amin‟ny firenena rehetra, na vahoaka maro izany no misy io fiangonana io.
Ohatra iray hafa: apokalypsy 17:3 « Dia nentiny tamin’ny Fanahy ho any an’efitra aho ary nahita vehivavy nitaingina bibidia mivolon-jaky, feno anarana fitenenan-dratsy sady nanan-doha fito sy tandroka folo. »
Fantatra ny dikan‟ny bibidia = fanjakana, fantatra ny dikan‟ny vehivavy = fiangonana, ny dikan‟ny tandroka izany dia mpanjaka. Ka raha hamoaka ny tena hevitry ny teny izany isika, araka ireny famakiana ny boky Marka sy Lioka ireny ohatra, dia toy izao izany no tokony hamakiana azy io:
Apokalypsy 17:3 « Dia nentiny tamin’ny Fanahy ho any an’efitra aho ary nahita fiangonana nitaingina fanjakana mivolon-jaky, feno anarana -dratsy sady nanan-doha fito sy mpanjaka folo. »
Vehivavy mitaingina bibidia, izany dia milaza fa fiangonana mitaingina fanjakana, izany hoe ny fahefan‟ilay fiangonana izany no mibaiko ilay fanjakana.
Ny hevitry ny teny hoe DRAGONA dia midika hoe DEVOLY sy SATANA.
Apokalypsy 12:9 « Ary nazera ilay dragona, dia ilay menarana ela, izay atao hoe devoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao; dia nazera tamin’ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. »
DRAGONA = DEVOLY sy SATANA;
Ka ianao izay manao T-shirt misy dragona ireny, na misy tatouage dragona, na mametraka sary dragona ao an-trano, dia midika fa hoe an‟i satana ny foko sy ny fiainako.
Ny kintana dia midika hoe anjely. KINTANA = ANJELY
Ny kintana dia midika hoeanjely, fa mety ho anjely tsara io, ary mety koa ho anjely ratsy ihany koa, arakaraky ny fisehoan‟izay hevitry ny teny ao anatin‟ny fehezanteny na ny“context” misy eo:
Ohatra: apokalypsy 9:1 « [Ny nitsofana ny trompetra fahadimy, sy ny nahatongavan’ny loza voalohany] Ary ny anjely fahadimy nitsoka, dia hitako fa, indro, nisy kintana anankiray avy tany an-danitra latsaka tamin’ny tany; ary nomena ilay anjely ny fanalahidin’ny lavaka tsy hita noanoa. »
Eto izao dia mahita kintana iray tany andanitra, ka latsaka taty amin‟ny tany, dia jereo tsara ilay kintana nazera tamin‟ny tany fa hazavainy tsara any amin‟ny apokalypsy 12:9 « Ary nazera ilay dragona, dia ilay menarana ela, izay atao hoe devoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao; dia nazera tamin’ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. »
Eto dia mazava tsara ny hanazavany azy, fa misy anjely izay nazera tety an-tany, araka ny voalaza tany amin‟ny toko fahasivy hitantsika eo ambony io. Ka tandremo izany tsy hataon‟ny olona hoe: ianao ity dia sahala amin‟ny anjely latsaka an-tany, dia tandremo sao dia falifaly amin‟izany hoe: ohatra ny anjely latsaka an-tany izany, fa ny “code” ny anjely latsaka an-tany dia devoly sy satana no dikany.
Efa hitantsika tany amin‟ny Daniela fa hoe: “ny rivotra efatry ny tany mibosesika manaraka ny tany”. Ny hevitry ny teny hoe RIVOTRA izany dia midika hoe ADY,ady lehibe voalohany na ny “première guerre modial” na ny ady lehibe faharoa na ny “deuxième guerre mondial”.
Jeremia 25:31 – 32 «31 Mihatra amin’ny faran’ny tany ny fihorakorahana; Fa Jehovah manana ady amin’ny firenena; Mifandahatra amin’ny nofo rehetra Izy, ka ny ratsy fanahy dia atolony ho an’ny sabatra, hoy Jehovah. 32 Izao no lazain’i Jehovah, Tompon’ny maro: Indro, hisy loza hivoaka hitety ny firenena samy hafa, ary hisy tafio-drivotra mahery hiposaka any amin’ny faran’ny tany; »
Jeremia 49:35 – 37 « 35 « Izao no lazain’i Jehovah, Tompon’ny maro: Indro, hotapatapahiko ny tsipìkan’i Elama, Izay fototry ny heriny. 36 Ary hitondra Avotra efatra avy amin’ny lafiny efatry ny lanitra Aho hamelezana an’i Elama, ary haeliko ho amin’izany rivotra rehetra izany izy, ka tsy hisy firenena izay tsy halehan’ny voaroaka avy any Elama. 37 Fa hampivadi-po an’i Elama eo anoloan’ny fahavalony sy eo anoloan’izay mitady ny ainy Aho ka hahatonga loza aminy, dia ny firehetan’ny fahatezerako, hoy Jehovah; Ary hampanenjehiko azy ny sabatra Mandra-pandaniko azy; »
Ohatra raha hamaky ny bokin‟ny Daniela isika: Daniela 7:2 – 3 «2 Dia niteny Daniela ka nanao hoe: Nahita tamin’ny fahitako tamin’ny alina aho, fa, indreo, ny rivotra efatry ny lanitra nibosesika teny amin’ny ranomasina lehibe. 3 Ary nisy biby efatra lehibe samy hafa niakatra avy tamin’ny ranomasina. »
Efa hitantsika fa ny” code” rivotra dia midika hoe ady, ranomasina dia midika hoe vahoaka, ary ny biby dia midika hoe fanjakana
Raha hamaky ity teny ity izany isika, dia izao no heviny
Daniela 7:2 – 3 «2 Dia niteny Daniela ka nanao hoe: Nahita tamin’ny fahitako tamin’ny alina aho, fa, indreo, ny ady efatry ny lanitra nibosesika teny amin’ny vahoaka betsaka. 3 Ary nisy fanjakana efatra lehibe samy hafa niakatra avy tamin’ny vahoaka. »Izany hoe, hisy ady lehibe izay hifanandrinan‟ny firenena efatra lehibe izany, izay samy manana ny vahoakany avy.
Mbola maro ireo code hafa fa tsy hivalapatra amin‟izany isika fa hiroso amin‟ny famahana ny code sasany indray isika dia ny mikasika ny loko maro samihafa hita ato amin‟ny baiboly.